यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाईमा पनि छन् की ? – Krazy NepaL
November 17, 2021 154
महिला र पुरुषको विचको सम्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पुरुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने महिला पुरुषसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तुष्ट रहने विश्वास गरिन्छ ।
थाहा पाउनुहोस् पुरुषमा तल उल्लेखित गुणहरु चाहन्छन् हरेक महिलाहरु:
स्वभाव : कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो स म्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आकर्षित गर्छ ।
महिलालाई ध्यान दिनुस: आफुनो प्रेमीको लागि सबै भन्दा आवश्यक चिज ध्यान दिनु पनि हो । आफ्नो मान्छेको हरेक कुराहरुमा राम्रो सँग ध्यान दिनुभयो भने भाबनात्मक अझै नजिक हुन्छ सम्बन्ध । यो कुरा चाहे पुरुष चाहे महिला दुवैमा आवश्यक पर्दछ ।
सरसफाई: सम्बन्धलाई प्रगाध बनाउने अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो सरसफलाई । दैनिक सरसफाई चट्ट लुगा लगाउनु भयो भने तपाई प्रति महिलाको छिटो ध्यानआर्किषत हुन्छ । अनि तपाई माया प्रेम बढ्न सक्छ ।
Prevमंसिर महिनामा चम्किने छ यी ६ राशिको भाग्य ! हेर्नुहोस् मासिक रा’शि’फ’ल
आज २६ आषाढ २०७८ शनिवारको राशि’फल अति राम्रो छ हेर्नुहोस्
भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुन दिऊँ ! हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लागौं : डा बाबुराम भट्टराई
छोडेर गैइहाल्यौ स्मिता भन्दै रोए लाहुरे राहुल , कस्तो वियोगान्त कथा रच्यौ नि भन्दै सारा नेपालीको आखामा आसु ( भिडियो हेर्नुहोस